बाइकमा एक्लै देश च’हार्ने केटी – List Khabar
Home / जीवनशैली / बाइकमा एक्लै देश च’हार्ने केटी
admin October 23, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 89 Views
बाइकमै आधा नेपाल घुमिसकेकी सभ्या केसीलाई लाग्छ– मनमा आँट, अठोट र आफूमा विश्वास भए गर्न नसकिने केही छैन। एक महिनाअघिको झिसमिसेमै पोखराकी सभ्या केसीले आफ्नो ड्युक बाइक पुछपाछ पारिन्, आवश्यक सामान राखेको ब्याकप्याक बोकिन् र एक्लै हुइँकिइन् बिर्तामोडसम्म। एकै दिनमा करिब ७०० किलोमिटर लामो यात्रा गरेकी उनले बिर्तामोडमा साथी भेट्टाइन् र लागिन् इलामतर्फ। स्नातक अध्ययन गरिरहेकी सभ्यालाई बाइकमा लामो यात्रा गर्न औधी मन पर्छ।
नयाँ ठाउँ, नयाँ समाज र संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्दा उनलाई जीवनकै एउटा नयाँ पाटो खुलेझैं लाग्छ। त्यसैले अलिकति फुर्सद पाउनुपर्छ, उनी ब्याकप्याक भिर्छिन् र निस्किन्छिन् नौलो यात्रामा। ‘अरु देशमा कस्तो छ थाहा छैन, तर नेपालमा अलिकति पर पुग्नुपर्छ लवज, भाषा, रहनसहन बेग्लै देखिन्छ,’ सभ्या भन्छिन्, ‘यो नयाँपनले मलाई सधैंं रोमाञ्चित बनाउँछ।’ बाइकमा यात्रा गर्दा बेग्लै अनुभव हुन्छ, जुन बस वा अरु गाडीमा यात्रा गर्दा हुँदैन। उनी भन्छिन्, ‘एक खालको विशेष सुविधा हुन्छ बाइकमा। वरपर हेर्दै हु’इँकियो, मन लागेको ठाउँमा रोक्यो।’
उनले आफ्नो यात्राको भिडियो बनाउँछिन् र युट्युबमार्फत सार्वजनिक गर्छिन्। त्यसैले उनी युवामाझ ‘मोटो भ्लगर’ सभ्या राइड्सको नामले चर्चित छन्। स्याङ्जा, फेदीखोला–१ कुपिन्डेमा जन्मिएकी सभ्याले कक्षा ७ सम्म गाउँकै विद्यालयमा पढेकी हुन्। त्यसपछिको विद्यालय शिक्षा पोखरा र कलेज काठमाडौंमा पढ्दैछिन्। बुवा भारतीय सैनिक, आमा घरव्यवहारमा व्यस्त। बीएससी सीएसआईटी तेस्रो सेमेस्टर पढ्दै गरेकी सभ्यालाई पढाइबाहेक घुमघाम र एडभेन्चरमा रुचि छ। यसमा परिवारको मिठो साथ।
यही रुचिले सभ्यालाई ‘मोटो भ्लगर’ बनाएको छ। उनको युट्युब च्यानल ‘सभ्या राइड्स्’ का सब्सक्राइबर एक लाख ८० हजार पुगेका छन्। सुरुमा सभ्या स्कुटर चढ्थिन्। तर उनको मन भने बाइकमै थियो। तीन वर्षअघिदेखि उनी ड्युक बाइक चढ्न थालिन्। ड्युकमा पोखरा आसपासका स्थान घुमेर ‘भ्लग’ बनाउन थालिन्। त्यसपछि हो, ड्युकमा हुइँकिने ‘मोटो भ्लगर’का रुपमा सभ्याले चर्चा पाएको। उनलाई बाइकमा एक्लै लामो यात्रामा जाने रहर पहिलेदेखि नै थियो। त्यो रहर पूरा गर्ने अवसर जु’रायो माउन्टेन ड्युको अडिसनले।
दुई वर्षअघि माउन्टेन ड्युले एड्भेन्चरस खेलका लागि अडिसन आह्वान ग-यो। सभ्या बुटवल अडिसनका लागि छानिइन्। बुटवल जाँदा उनले पोखराबाट, पाल्पा हुँदै जाने छोटो बाटो छाडेर चितवनको बाटो रोजिन्। मोटरसाइकलमा उनको पहिलो लामो यात्रा त्यही थियो। पहिलो दिन चितवन र दोस्रो दिन बुटवल पुगिन्। सभ्या भन्छिन्, ‘पोखराबाट बुटवलसम्मको बाइक यात्रा गरेपछि लाग्यो, अब म जहाँ पनि एक्लै पुग्न सक्छु।’ घरनजिकै केही किलोमिटर यात्रा गरेर भ्लग बनाउने सभ्याले त्यसपछि हो– बाइकमा देश च’हार्न थालेको।
अडिसन दिएका ३२५ जनामा छानिएर सभ्याले भोटेकोसीमा -याफ्टिङ, ब’न्जिजम्प, क्या’नोइङ, रक कला’म्बिङलगायत स’हासिक खेल खेलिन्। यसले उनलाई थप हिम्मत दियो। गत वर्ष लकडाउन सुरु हुने केही समयअघि मात्र सभ्याले भारतमा ‘म’द्रास रेस ट्रयाक ए’क्सपिरियन्स’मा पनि भाग लिइन्। टीभीएसको प्रायोजनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट दुई युवती र ३० युवक छानिएको रेसमा उनले बाइक राइडको थुप्रै अनुभव र शैली सिकिन्। सभ्यालाई अहिले बाइकको ‘प्रोमोसनल’ भिडियो बनाइदिन विभिन्न कम्पनीले ‘अफर’ गर्छन्।
उनले टीभीएस, यामाहा, जाभा, केटिएम ड्युकलगायतका बाइकको प्रोमोसनल काम गरिसकेकी छन्। बेनेलीसँग पनि सम्झौता भएको छ। ‘सहज र निरस यात्रा खासै याद हुँदैन,’ सभ्या भन्छिन्’, ‘थोरै दुःख–अप्ठ्यारो भयो वा रोमाञ्चक भयो भने त्यो सम्झनामा रहिरहन्छ– पछिसम्म ऊर्जा पनि दिन्छ।’ एक महिनाअघि बिर्तामोडको यात्रा गर्दा मिर्मिरेमै घरबाट हिँडेकी उनी झमक्क साँझ नपरुन्जेल कुदिरहिन्। ‘जाडो मौसममा भाइजर र मास्क लगाउँदा बाफिएर केही नदेखिने,’ उनी भन्छिन्, ‘भाइजर खोल्दा आँखामा हुस्सुले सास्ती।’
उसो त पुस–माघको क’ठ्यांग्रिँदो चिसोेमा बाइक हुइँकाउने उनकै रोजाइ थियो। जंगलको बीचैबीच यात्रा गर्दा तपतप चुहिने शीत, चिसो हावा, हावामा बेग्लै गन्ध, सडकछेउका बस्तीमा आगो तापिरहेका मानिस,– यस्तो अनुभव र दृश्य गर्मीमा कहाँ पाउनु? सभ्याले बिर्तामोडको यात्रा सुरु गर्नु केही दिनअघि मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणमा परी मोटरसाइकलमा सवार महिलाको ज्यान गएको थियो। परिवेश खासै थाहा नभएको हाइवेमा एक्लै बत्तिँदा उनलाई अ’त्यास नलागेको भने होइन। ‘तर, त्यो यात्रा सम्झँदा अहिले झन् रोमाञ्चित हुन्छु,’ सभ्या भन्छिन्।
उनी बाइक कुदाउने काम मात्रै गर्दिनन्। बाइक र हेल्मेटमा जडान गरिएको गोप्रो क्यामराले दृश्य खिचिरहेकी हुन्छिन्, आवाज भरिरहेकी हुन्छिन्। जुन उनी आफैं र उनका दर्शकका लागि झन् रोमाञ्चक भैदिन्छ। ‘यात्रामा बेलाबेला मन आ’त्तिए पनि अरु अ’प्ठ्यारो केही भएन तर निकै था’कें,’ पोखरा–बिर्तामोडको यात्रा सम्झिंदै उनी भन्छिन्। थ’कानको थप कारण थियो– म’हिनावारी। बीचबाटोमा उनलाई म’हिनावारी भयो। ‘यस्तो बेला असाध्यै पेट दु’ख्छ, शरीर गल्’छ,’ उनी भन्छिन्। तर, पनि उनले बिहान घरबाट राखेको लक्ष्यअनुसार बेलुका बिर्तामोड पुगेरै छोडि
नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्ड उनलाई सबैभन्दा मन पर्छ। अन्य ठाउँको बाटो उनलाई राजमार्गजस्तै लाग्दैन। सभ्या कारण अ’थ्र्याउँछिन्, ‘नारायणघाट–मुग्लिनको बाटो फ’राकिलो छ। आवश्यक ट्राफिक चिह्न राखिएको छ।’ केही दिनअघि उनका भारतबाट ‘मोटो भ्ल’गर’ साथी आएका थिए। बुटवलबाट स्याङ्जा हुँदै पोखरा पुग्दा उनीहरूले सोधे– हामी किन भित्री बाटोबाट हिँडेको? त्यही बाटो राजमार्ग भनेर चि’नाउनुपर्दा सभ्यालाई खिन्न लाग्यो। नेपाल समय
Previous बिहे पछि पहिलोपटक अज्नु पन्त र उनको श्रीमान, प्रेम यसरी परेको थियो भन्दै खुलाए रहस्य !
Next मृत्यु हुनु केहीबेर अघि श्रीमतिलाई फोन गरेर यसो भनेका रहेछन्